काठमाडौँ, १ भदौ निजी क्षेत्रको वायु सेवा प्रदायक कम्पनी श्री एयरलाइन्सले क्यानेडियन जहाज निर्माता कम्पनी बम्मार्डियरको ८० सिट क्षमताको टर्बोजेट क्वू ४०० सिरिजको जहाज ल्याएको छ । उक्त जहाज ओमन हुँदै भारतको अहमदाबादबाट आज त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अवतरण गरेको हो । नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० अभियानको सन्दर्भमा आन्तरिक उडानलाई थप विस्तार गर्ने लक्ष्यसहित नयाँ जहाज थपिएको कम्पनीका संस्थागत प्रबन्धक अनिल मानन्धरले जानकारी..
रुकुमपूर्व, ३१ साउन । मौसम प्रतिकुलताका कारण राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमल्सिनाको हेलिकप्टर रुकुमपूर्वमा अवतरण गरिएको छ । बागलुङको ढोरपाटन आउनुभएका उहाँ पोखरा जाने क्रममा मौसममा आएको प्रतिकूलताका कारण हेलिकप्टर अवतरण गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । मौसममा आएको प्रतिकूलताका कारण हेलिकप्टर भूमे गाउँपालिका–६ महतको आधारभूत विद्यालय रिसालचौरको प्राङ्गणमा अवतरण गरिएको प्रहरी नायब उपरीक्षक योगेन्द्रकुमार खड्काले जानकारी दिनुभयो । ..
मुहार फेरिएको कलंकी, प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए ‘विकासको नमुना हेर्न कलंकी जानू’
काठमाडौँ, ३१ साउन । एक वर्षअघिसम्म उपत्यकामा अत्यधिक सवारी जाम हुने स्थानमध्ये एक थियो कलंकी । जहाँ नागढुंगा नाका हुँदै उपत्यका भित्रिने र बाहिरिने सवारीको चाप हुन्थ्यो । अर्कोतर्फ चक्रपथ परिक्रमा गर्ने सवारीको लाम पनि उत्तिकै हुन्थ्यो । धुवाँ, धुलो र जामले मानिस आजित थिए । राजधानी प्रवेश गर्ने मुख्य नाका हुनाले अरू विकल्प पनि थिएन । तर, अहिले कलंकीले मुहार..
पृथ्वीराजमार्गमा भएको दुर्घटनामा २ जनाको मृत्यु
तनहुँ, ३० साउन पृथ्वीराजमार्गमा आज भएका छुट्टाछुट्टै सवारीसाधन दुर्घटनामा दुई जनाको मृत्यु भएको हो । दमौलीबाट डुम्रेतर्फ जाँदै गरेको ग९प ४२६५ नंको मोटरसाइकल र विपरित दिशाबाट आउँदै गरेको बा२१च २८३० नंको कार व्यास नगरपालिका–१२ कमलबारीमा एकापसमा ठक्कर खाँदा दुर्घटना भएको हो । कारको ठक्करबाट सख्त घाइते मोटरसाइकलमा सवार आँवुखैरनी गाउँपालिका–६ का ४८ वर्षीय थोमस बस्नेतको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो । गम्भीर..
सर्वेन्द्र खनालले किन त्रिभुवन विमानस्थलको आकस्मिक निरीक्षण गरे ?
काठमाडौँ, ३० साउन प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आकस्मिक निरीक्षण गर्दै कार्यरत प्रहरी कर्मचारीले यात्रुहरुसँग सभ्य, शिष्ट र यात्रुमैत्री व्यवहार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । विमानस्थलको निरीक्षणका क्रममा आज प्रहरी कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिँदै प्रहरी महानिरीक्षक खनालले प्रहरी कर्मचारीले व्यक्तिगत एवम् पेशागत आचरण र व्यवहारमा थप सुधार गरी आफ्नो जिम्मेवारीमा लगनशील, निष्पक्ष र निःस्वार्थ हुनसमेत निर्देशन दिनुभयो । विमानस्थल सुरक्षा कार्यालयमा कार्यरत..
काठमाडौँ, ३० साउन । निजी क्षेत्रको वायुसेवा प्रदायक कम्पनी श्री एयरलाइन्सले अन्तरराष्ट्रिय उडानका लागि अनुमति (लाइसेन्स) पाएको छ । आन्तरिक उडानमा रहेको उक्त एयरलाइन्सले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट अन्तरराष्ट्रिय गन्तब्यका लागि नियमित उडान अनुमति पाएको हो । योसँगै अन्तरराष्ट्रिय उडान भर्ने नेपाली वायुसेवा प्रदायक कम्पनीको सङ्ख्या चार पुगेको छ । अहिले राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स), हिमालय एयरलाइन्स..
सुधार होला त नेपालको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ?
काठमाडौँ, २९ साउन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेशकुमार भट्टराईले अवको एक महीनाभित्रमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुधार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शद्धारा आज यहाँ आयोजित “नेपालको पर्यटन क्षेत्रको प्रवद्र्धनका सम्भावना तथा सहजीकरणका सन्दर्भमा निजी क्षेत्रको भूमिका” विषयक अन्तक्र्रियामा मन्त्री भट्टराईले पहिलेको तुलनामा सुधार भएको र आकाशमा हुने ‘हवाई ट्राफिकिङ’ लगायतका समस्यालाई अझै व्यवस्थित ढङ्गबाट समाधान गरी समग्र..
नेपालगञ्ज उपमहानगर ७ नगर बस सञ्चालनमा ल्याउँदै
नेपालगञ्ज, २९ साउन । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले ७ वटा नगर बस सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ।उपमहानगरले गाउँ नगर साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत गरिबी निवारण कार्यक्रमलाई सफल बनाउन ७ वटा सुविधायुक्त सवारी सञ्चालनमा ल्याउन लागेको हो। बसबाट भएको आम्दानी सबै गरिबी निवारण कार्यक्रममा खर्चिने उपमहानगरले जनाएको छ।चालक र सहचालकलाई सरकारले तोकेको बमोजिम सुविधा उपमहानगरले दिनेछ। उक्त नगर बसमा चालक जनजाति र सहचालक महिलालाई राखिने उपमहानगरले जनाएको छ। चालक..
धादिङ दुर्घटना : ४ जनाको अवस्था गम्भीर
काठमाडौँ, २८ साउन ज्वालामुखी गाउँपालिका–३ अमराईमा आज भएको बोलेरो जिप दुर्घटनामा घाइते हुनेको सङ्ख्या १४ पुगेको छ । चार जनाको अवस्था गम्भीर छ । धादिङबेँसीबाट मैदीतर्फ जाँदै गरेको बा१३च ५२३० नंको बोलेरो जिप दुर्घटना भएको थियो । घाइते सबै एउटै गाउँका भएको प्रहरी नायब उपरीक्षक रुपक खड्काले जानकारी दिनुभयो । यात्रु र सामानले खचाखच भरिएको जिप उकालोमा गुड्न नसक्दा दुर्घटना भएको घाइते यात्रु..
यातायात विभाग : लामो दूरीमा २ चालकको व्यवस्थालाई कडाइ गरिने
काठमाडौँ, २८ साउन । लामो दूरीमा चल्ने सवारीसाधनको दुर्घटना बढेसँगै यातायात व्यवस्था विभागले दुई चालक हुनुपर्ने व्यवस्थालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने भएको छ । विभागले मङ्गलबार सूचना जारी गर्दै प्रस्थानविन्दुबाट २५० किमी वा सोभन्दा बढी दूरीमा चल्ने सवारीसाधनले अनिवार्यरूपमा दुई चालक नराखेको पाइए कारवाही गर्ने जनाएको हो । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १०४ मा लामो दूरीमा चल्ने सार्वजनिक सवारीमा..
काठमाडौँ, २७ साउन निजी क्षेत्रको वायुसेवा प्रदायक कम्पनी श्री एयरलाइन्सले अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रमा चार्टर्ड उडान शुरु गरेको छ । नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० अभियानलाई लक्षित गर्दै कम्पनीले भारतको वनारसमा आज परीक्षण उडान (प्रभिङ फ्लाइट) गरेको एयरलाइन्सका संस्थागत प्रबन्धक अनिल मानन्धरले राससलाई जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार ५० सिट क्षमताको सिआरजे २०० र ७० सिट क्षमताको सिआरजे ७०० जहाजबाट बनारस गन्तब्यको उडान भर्नेछ ।..
पहिराले सडक भासिँदा यातायात ठप्प : ८ परिवारले घर छाडे
बाजुरा, २७ साउन । साँफे मार्तडी सडकमा पहिरा जाँदा यातायात सेवा ठप्प भएको छ । बूढीगङ्गा नदीले सडक नै कटान गरी भासिन थालेपछि यातायात सेवा ठप्प हुन पुगेको हो । शिलान्यास भएको २३ वर्षपछि निर्माण सम्पन्न भएर यातायात सेवा सञ्चालन भएको एक वर्ष नपुग्दै दर्जनांै स्थानमा पहिरा जाँदा सो सडक अवरुद्ध भएपछि बाजुरावासी प्रभावित भएका छन् । गत वर्ष मात्र कालोपत्रको काम..
काठमाडौँ, २७ साउन । ट्राफिक प्रहरीले अनाधिकृत रुपमा फुटपाथ तथा सडकमा पार्किङ गर्ने ३८ हजार ८८६ सवारीसाधनलाई कारवाही गरेको छ । महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा जथाभावी रुपमा फुटपाथमा पार्किङ गर्ने उक्त सवारीसाधनलाई कारवाही गरेको हो । महाशाखाले आव २०७४÷०७५ मा ३३ हजार ७०३ सवारीसाधनलाई कारवाही गरेको थियो । महाशाखाले उपत्यकाको पुतलीसडक, दरबारमार्ग, लाजिम्पाट, न्यूरोड, बानेश्वर, कोटेश्वर, सातदोवाटो, कलङ्कीलगायतका..
काठमाडौँ, २६ साउन भैरहवास्थित निर्माणाधीन गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि आवश्यक विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउन अन्तरसरकारी निकायबीच आवश्यक समन्वय गरिने भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा आज भएको छलफलमा नेपाल विद्युत् प्राधिरकण, सडक विभाग तथा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबीच समन्वय गरेर काम गर्ने विषयमा सहमति भएको हो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराई, पर्यटन..
मापसे गर्ने १ सय ४५ चालकको अनुमतिपत्रमा प्वाल
हेटौँडा, २६ साउन । जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय मकवानपुरले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा मादकपदार्थ सेवन (मापसे) गरी सवारी चलाउने एकसय ४५ चालकको सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) मा प्वाल पारेको छ । कारवाहीस्वरूप लाइसेन्स प्वालसँगै प्रतिचालक रु एक हजार जरिवानासमेत असूली गरेर सवारी चालक अनुमतिपत्र प्वाल पारेको हो । त्यसैगरी लाइसेन्स नभएका ५९ चालकबाट प्रतिचालक रु दुई हजारका दरले जरिवाना उठाइनुका साथै स्मार्ट..
काठमाडौँ, २६ साउन मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखिएको एउटा तस्बिरका कारण सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई धेरैले उडाए । मेची-महाकाली मेल र कर्णाली लेखिएका र नेपालको झण्डा अङ्कित रेल देखिने तस्बिरमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको रेल मोहको झल्को देख्न सकिन्छ । रेलमार्गबाट नेपाललाई चीन जोड्ने योजनाबारे विमर्श भइरहेका बेला सक्कलीजस्तै देखिनेगरी सरकारी वेबसाइटमा सो तस्बिरले स्थान पाएको छ। रेलको नाम..
पेट्राेलकाे परनिर्भरता कम गर्न विद्युतीय सवारीका लागि २० चार्जिङ स्टेशन बन्दै
काठमाडौं, २५ साउन । विद्युतीय सवारी साधनका लागि २० वटा चार्जिङ स्टेशन निर्माण हुने भएका छन् । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालनका लागि सहज बनाउने लक्ष्यका साथ २० वटा चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्ने भएको हाे । विद्युतीय सवारी साधनको प्रवद्र्धनलाई जोड दिँदै पेट्राेलियम पदार्थको परनिर्भरता कम गर्ने लक्ष्यका साथ चार्जिङ स्टेशन निर्माणमा विशेष जोड दिइएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले..
चारपांग्रे पठाओ अडर गर्नै सय रुपैयाँ लाग्ने, भाडा कति ?
काठमाडौं, २४ साउन । दुईपांग्रे सवारीसाधनबाट यात्रुलाई सेवा दिइरहेको पठाओले अब चारपांग्रे सेवा सुरु गरेको छ । पठाओ कम्पनीले शुक्रबारबाट काठमाडौं उपत्यकामा यो सेवा सुरु गरेको हो । यस सेवाका लागि मोबाइल एपमार्फत् दुईपांग्रे तथा चारपांग्रे सवारी अडर गर्न सकिन्छ । पठाओले शुक्रबारबाट काठमाडौं उपत्यकामा सेवा सुरु गरे सँगै उपत्यकाका तीन सय ट्याक्सी पठाओमा जोडिएको जानकारी दिएकाे छ । चारपांग्रेमा पनि कार लाइट र कार प्लस गरी दुई किसिमको सेवा..
त्रिशूलीमा बस खस्दा ज्यान गुमाउनेको संख्या ५ पुग्यो, २१ अझै बेपत्ता
काठमाडौं, २४ साउन । सर्लाही सदरमुकाम मलङ्गवाबाट ४५ यात्रु लिएर काठमाडौँ जाँदै गरेको बस धादिङको बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका–३ सलाङघाटस्थित त्रिशूली नदीमा खस्दा पाँच पुगेको छ । तीनजनाको शव बिहानै फेला परेको थियो भने हराइरहेका मध्ये एक महिलाको शव मुग्लिनमा र अर्को जुगेडीमा भेटिएको हो । जिल्ला ट्राफिक कार्यालय धादिङका प्रमुख नेत्रप्रकाश भट्टका अनुसार बस नदीबाट निकाल्नका लागि क्रेन मगाइएको छ । २१ जना..
पठाओले ट्याक्सी सेवा पनि थाल्यो, चाहेकै ठाउँमा बोलाएर सेवा लिन सकिने
काठमाडौँ, २४ साउन । मोटरसाइकलबाट यात्रु सेवा दिइरहेको राइड सेयरिङ एप पठाओले शुक्रबारदेखि काठमाडौं उपत्यकामा ट्याक्सी सेवा सुरु गरेको छ। यात्रुलाई सेवा दिन दुई सयभन्दा बढी ट्याक्सीसँग सम्झौता गरिएको पठाओका बजार प्रबन्धक सुरक्षा हमालले जानकारी दिइन्। पठाओका प्रयोगकर्ताले एपको सहयोगले मोटरसाइकलजस्तै ट्याक्सीलाई पनि आफूले चाहेको ठाउँमा बोलाएर सेवा लिन सक्नेछन्। यसका लागि पठाओले आफ्नो मोबाइल एपलाई अपडेट गरिसकेको हमालले बताइन्। ‘ग्राहकको मागअनुसार..
अब सार्वजनिक यातायातमा भाडा नतिर्नेले ५ हजारसम्म जरिमाना तिर्नुपर्ने
काठमाडौँ, २३ साउन सार्वजनिक यातायातमा भाडा नतिर्ने यात्रुलाई सरकारले कम्तिमा एक हजार र बढीमा पाँच हजारसम्म जरिमाना गर्न सक्ने प्रावधान सहितको यातायात प्राधिकरण विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएको छ । यस्तो जरिमाना ट्राफिक प्रहरीको कम्तिमा सहायक निरिक्षक (सई)ले गर्नेछ । अझ अनावश्यक सहुलियत माग्ने, नपाउने सुविधा लिने प्रयत्न गर्ने र भाडा तिर्न इन्कार गर्नेले पनि जरिमाना तिर्नुपर्नेछ । त्यस्तै जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका..
बल्ल आइपुग्यो ‘मास प्रिन्टर’
काठमाडौँ, २२ साउन । झण्डै १० लाख ‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्र छाप्न बाँकी रहँदा सरकारले ‘मास प्रिन्टर’ भित्र्याएको छ । आज दिउँसो मात्रै प्रिन्टर आइपुगेको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ । एकडेढ महीनापछि सो उपकरण प्रयोगमा आउने विभागका प्रवक्ता तीर्थराज खनालले बताउनुभयो । उपकरण आएपछि त्यसको जडान, परीक्षणलगायतका काम सकिएपछि नियमित रुपमा सञ्चालनमा आउने उहाँले बताउनुभयो । विभागले मदरास प्रिन्टर प्रालिमार्फत प्रिन्टर खरीद..
हेटौँडा, २२ साउन । हेटौँडा काठमाडौँ जोड्ने छोटो दुरीको फाखेल र सिस्नेरी सडकमा जोरबिजोर प्रणालीमा सुमो सञ्चालन हुने भएको छ । स्थानीय व्यवसायीले सवारी सञ्चालनमा अवरोध गर्ने चेतावनी दिएपछि मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी अश्मान तामाङको उपस्थितिमा आज बसेको बैठकले गत आर्थिक वर्षमा मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको अध्यक्षतामा मुख्यमन्त्री कार्यालयमा भएको छलफलमा निर्णय भएको भन्दै जोरबिजोर प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हो । समस्या समाधानका..
ब्रेथलाइजर मेसिन बिग्रिँदा ट्राफिक प्रहरीद्वारा सुघेरै मपसे चेक
डोटी, २२ साउन जिल्ला ट्राफिक प्रहरीले ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि पर्याप्त प्रविधि र सामग्री नहुँदा समस्या भइरहेको जनाएको छ । डोटीमा ट्राफिक प्रहरीका लागि भएको एकमात्र ब्रेथलाइजर मेसिन बिग्रेको छ । यही कारण मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाउने र प्रहरीबीच विवाद हुने गरेको छ । बिग्रेका मेसिन मर्मतका लागि क्षेत्रीय ट्राफिक प्रहरी कार्यालय अत्तरीया पठाएको लामो समय भइसक्दा नपठाउँदा डोटी ट्राफिक प्रहरीलाई..
पठाओको ट्याक्सी सेवा सुचारु, नेपाल सरकारले तोकेबमोजिम भाडा तिर्नुपर्ने
काठमाडौँ, २२ साउन राइड सेयर कम्पनी पठाओले शुक्रबारदेखि ट्याक्सी सेवा सुरू गर्ने भएको छ । दुई पांग्रे सेवाको सफलतापछि दोस्रो प्रोजेक्टको रूपमा आगामी शुक्रबारदेखि ट्याक्सी सेवा सुरू गर्न लागिएको पठाओका रिजनल डाइरेक्टर अशिममान सिहं बस्न्यातले जानकारी दिए । ‘हामीले सामाजिक सञ्जालमार्फत् ग्राहकसँग सुझाव मागेका थियौं, ट्याक्सीको माग उच्च भएपछि ट्यासी सेवा सुरू गर्न लागेका हौं,’ बस्न्यातले सेतोपाटीसगँ भने। हालको एपमा ट्याक्सी विकल्प छानेर..
काठमाडौँ, २१ साउन । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेशकुमार भट्टराईले राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) को सानलाई जहाजकै उचाइ बराबर पुर्याउने गरी सुधारको काम गरिने बताउनुभएको छ । राष्ट्रिय पर्यटन पत्रकार सङ्घका प्रतिनिधिमण्डलसँग आज सिंहदरबारमा भएको छलफलमा मन्त्री भट्टराईले राष्ट्रिय ध्वजाबाहक पर्यटक आगमनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो भन्दै निगमको हालको अन्योलग्रस्त अवस्थालाई सुधार गरी जहाजको उचाइझैँ बनाउने विश्वास व्यक्त..
काठमाडौँ, २० साउन नेपाल एशोसिएशन अफ टूर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा) ले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पूर्ण क्षमताका साथ सञ्चालनका लागि सरकारसँग माग गरेको छ । नाट्टाका पदाधिकारीसहितको टोलीले आज संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेशकुमार भट्टराईलाई सिंहदरबारमा भेटगरी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विद्यमान हवाई चाप व्यवस्थापनका लागि विमानस्थल २४ सै घण्टा सञ्चालनका लागि आग्रह गरेको हो । विमानस्थलमा हवाई ट्राफिकको चाप बढेका कारण..
काठमाडौँ, १७ साउन सरकारले निजी सवारीसाधनलाई भाडामा प्रयोग गर्न नपाइने कानुन ल्याएको छ । प्रदेश ३ ले बनाएको प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनमा निजी सवारीलाई व्यावसायिक प्रयोजनमा चलाउन नपाउने गरी घुमाउरो भाषामा प्रतिबन्ध लगाउन खोजेको छ । निजी सवारीलाई गैर-व्यावसायिक सवारीको रूपमा परिभाषित गरेको प्रदेश ऐनले यस्ता सवारीले निश्चित रुट, भाडा निर्धारण तथा यात्री बिमा गरेमा मात्र यात्रु बोक्न पाइने उल्लेख गरेको..
उफ ! कोटेश्वरको सास्ती
काठमाडौँ, १७ साउन । काठमाडौं भित्रने मुख्य नाका काटेश्वरमा अध्याधिक रुपमा ट्राफिक जाम बढेको छ । तीनकुने–सूर्य विनायक सडक छ लेनको बनेपछि काटेश्वर चोकमा ट्राफिक जामले सर्वसाधारण हैरान भएका छन् । अरनिको राजमार्ग, वीपी राजमार्ग हुँदै आउने सवारी साधन कोटेश्वर नाकाबाटै काठमाडौं प्रवेश गर्ने गरेका छन् । दैनिक हजारौको संख्यामा सवारी साधन ओहोरदोहोर गर्ने कोटेश्वर चोकमा आकाशे पुल नहुँदा ट्राफिक जामको थपबोझ..
नेपाल वायु सेवा निगमले असोजदेखि जापानको नारिता उडान गर्ने
काठमाडौँ, १६ साउन । राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायु सेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) ले जापानको नारिता अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा चार्टर्ड उडान गर्ने भएको छ । आगामी भदौ १२ गतेदेखि जापानको ओसाका सिधा उडान गर्ने तयारी गरेको निगमले नारिता विमानस्थलमा उडानको अनुमति पाएको हो । निगमले आउँदो अक्टोबरअर्थात् असोज महीनादेखि चार्टर्र्ड उडानको अनुमति पाएको निगमका प्रवक्ता गणेशबहादुर चन्दले राससलाई जानकारी दिनुभयो । निगमले नारिता विमानस्थलमा..
Results 1268: You are at page 11 of 43